यौन व्यवसायीबाट सिरियल किलर बनेकी महिला, जसले लिइन् ग्राहकको ज्यान | Ratopati
शुक्रबार १४ माघ, २०७८ Friday, 28 January, 2022
यौन व्यवसायीबाट सिरियल किलर बनेकी महिला, जसले लिइन् ग्राहकको ज्यान
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक २७, २०७८ chat_bubble_outline0
मृत्युपछि एलिन वुर्नोस फेरि अहिले चर्चामा छिन् । नेटफ्लिक्समा आएको नयाँ सिरियलले उनलाई चर्चामा तानेको हो । यौनकर्मी रहेकी एलिनले आफ्ना सातजना ग्राहकलाई गोली हानेर मारेकी थिइन् । यस हत्याकाण्डको सजाय स्वरुप उनले मृत्युदण्ड पाइसकेकी छिन् । फिल्म प्रदर्शनमा आएपछि मानिसहरुले उनीप्रति फेरि सहानुभूति देखाएका छन् । एलिनको कथालाई गलत तरिकाले देखाइएको उनीहरुको दाबी छ ।
१९५६ मा जन्म
एलिन वुर्नोसको जन्म १९५६ मा अमेरिकाको मिचिगन राज्यमा भएको थियो । उनी जन्मनुअघि नै बाबु आमाले डिभोर्स गरिसकेका थिए । जब उनी चार वर्षकी थिइन्, त्यतिबेला उनका भाइलाई हजुरबा–हजुरआमासँग बस्नका लागि पठाइयो । किशोरावस्थामै उनले स्कुल छाडिन् र देह व्यापारमा संलग्न भइन् ।
गोली हानेर ७ जनाको हत्या
रिपोर्टअनुसार १९८९–१९९० मा फ्लोरिडामा एलिनले गोली हानेर सात जनाको हत्या गरिन् । उनीहरुले एलिनसँग जबर्जस्ती सम्बन्ध बनाउन खोजेको र त्यसक्रममा एलिनले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको दाबी गरिएको थियो । यी सातजना उनीसामु ग्राहक बनेर आएका थिए ।
लामो सुनुवाइपछि अन्तत अदालतले एलिन वुर्नोसलाई ७ जना पूरुषहरुमध्ये ६ जनाको हत्या आरोपमा दोषी ठहर ग¥यो । उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो । र, २००२ मा विषालु इन्जेक्सन लगाएर मारियो ।
१९ वर्ष पुरानो घटना कसरी चर्चा ?
एलिन वुर्नोसको मृत्युको १९ वर्षपछि बनेको एउटा फिल्मका कारण उनको नाम फेरि चर्चामा आयो । नेट्फ्लिक्समार्फत रिलिज गरिएको ‘ट्रु क्राइम शो’ को दोस्रो एपिसोडमा एलिनको अपराधसँग जोडिएका घटनाहरु देखाइएको छ । यसबारे धेरै प्रयोगकर्ताहरूले ट्वीटरमार्फत प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । आफूमाथि गलत व्यवहार भएकाले उनले ७ जनाको हत्या गरेको प्रयोगकर्ताहरूको टिप्पणी छ ।
के छ पुलिस रेकर्ड ?
प्रहरी दस्तावेजहरूका अनुसार हत्याभन्दा पहिले पनि एलिन धेरैपटक पक्राउ परिसकेकी थिइन् । उनीविरुद्ध डकैती, कार चोरी, पक्राउको विरोध, जालसाजी, नशामा गाडी कुदाउनेलगायत धेरै मुद्दाहरु थिए । उनीसँग एउटा बन्दुक पनि थियो ।
छिमेकमा गोली चलिरहेको थियो, एउटा गोली ८०० फिट पर घरमा सुतिरहेका वैज्ञानिकको टाउकोमा लाग्यो
विवाहमा नाचेको भन्दै बेहुलाले थप्पड हानेपछि बेहुलीले गरिन् अर्कैसँग विवाह
यो पक्षी जो शिकारका लागि समुद्रभित्र ६२ फिट गहिराइमा पुग्छ
यी व्यक्ति जसले ६७ वर्षदेखि नुहाएका छैनन्, सडकमा मारिएका जनावर खान्छन् : स्वस्थ देखेर सबै हैरान
चर्को स्वर भएको भन्दै प्राध्यापकलाई जागिरबाट निकाला, अदालतले सुनायो यस्तो आदेश
पेन्सन बुझ्न मृत शरीर बोकेर कार्यालयमा...
स्वस्तिमाको ‘आइटम’ नृत्य भएको ‘थिरिमाली’ रिलिज
दिल्लीमा ६०० दिनदेखि स्कूल बन्द, विद्यार्थी कक्षाकोठा फर्कन आतुर
भोजपुरमा ब्राउन सुगरसहित दुई ट्रक चालक पक्राउ
भन्सारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा माग्दै सर्वदलीय आन्दोलन
स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने षड्यन्त्र : गोकर्ण विष्ट
हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात : हिउँ पगालेर पानी खानुपर्ने अवस्था
महोत्तरीमा कोरोना माहामारीको तेस्रो लहरमा १६६ संक्रमित, एक जनाको गयो
ब्रा र भगवानबारे विवादित बयान दिएर फसिन् श्वेता तिवारी, एफआइआर दर्ता
डि मारिया र मार्टिनेजको गोलमा अर्जेन्टिनाको जित